Deemed Export भनेको के हो ?
विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी स्वदेश भित्रै आफ्नो उत्पादन विक्री गरेमा त्यस्तो विक्रीलाई Deemed Export –आन्तरिक निकासी) भनिन्छ । यस्तो उत्पादनमा लागेको भन्सार, अन्तः शुल्क, मू.अ.कर रकमा निकासीमा सरह छुट पाइन्छ ।
1 अन्तरिक्ष पर्यटन
2 एफएटीएफ को निगरानी सूचीबाट नेपाल हटेको
3 निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कसरी ?
5 Career News and Info भाद्र १४, २०७४
6 Career News and Info श्रावण २२, २०७४
7 विकास योजना भन्नाले के बुझिन्छ ?
8 स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम संचालित जिल्लाहरु
9 विद्युतिय हाजिरी
10 नयाँ नगरपालिका घोषणा